Ndị mkpọsa | RayHaber | raillynews
Steam locomotives bụ uhere a na -akpata ụgbọ ala. Ejiri ụgbọ ala Steam site na etiti narị afọ nke 19 ruo n'etiti narị afọ nke iri abụọ. Ugbo ala bidoro ibupute ụgbọ ala n'ụgbọala, nke malitere iji ya na Germany n'etiti afọ 20. 1500s [More ...]
Nchịkọta ụdị ngwa agha, nke onye collecttakọ mkpoko Raoul Cabib mepụtara maka igwe uzuoku na ogologo njem, na-eche ndị na-anụ ọkụ n'obi ya na ebe a na-ahụ maka ihe ngosi Rahmi M. Koç. [More ...]
Onye ozi Turhan jiri nke mbụ National Diesel Electric Locomotive
Minista na-ahụ maka njem na akụrụngwa Mehmet Cahit Tturhan, osote onye isi ụgbọ njem na akụrụngwa Adil Karaismailoğlu, Eskişehir Gọvanọ Özdemir Çakacak, Eskişehir osote Maazi Nab Avcı na ndị nnọchi anya ya, General Manager Hayri Avcı [More ...]
Egosiputa Steam Locomotives n'ọdụ ụgbọ okporo ígwè Malatya na-eche ndị ọbịa
Egosiputa Steam Locomotives n'ọdụ ụgbọ okporo ígwè Malatya na-eche ndị ọbịa; Steam locomotives lara ezumike nka mgbe ọ jere ozi ọtụtụ afọ na TCDD na-eche ndị ọbịa. Lọ ihe ngosi nka n’elu okporo ụzọ edoziri na Malatya Railway Station mpaghara [More ...]
Mkpebi ọzọ dị mkpa nke ndị igwe ihe ọkụ ọkụ ahụ bụ mkpebi dowere na mgba nke onye isi ọkwọ ụgbọ njem-Sen. Dị ka ọ si mara, na ebepınar mpaghara nke İzmir (Ebepınar Depot - Balıkesir, Uşak, Denizli) [More ...]
N'okpuru onye isi oche nke TCDD Transportation Inc. General Manager Erol Arıkan na T andLOMSAŞ General Manager Hayri Avcı, ndị nnọchianya ahụ nwere nzukọ na TÜLOMSAŞ n'ime usoro mmemme moder nke ụgbọ elu ahụ. N'oge nzukọ a, ụdị mmanụ dị iche iche n'oge oge 2020-2022 [More ...]
Emechara ụlọ ọrụ Vossloh Locomotive na-arụ ọrụ na Kiel na March 2018. Vossloh, nke a na-eji ọdụ ya niile mepụta, tinyere obere ụgbọ ala nke na-agagharị agagharị n'ime ụlọ ọrụ a. [More ...]
Ọdụ ụgbọ oloko na Balıkesir na May gara aga, jiri nwayọọ gbazite na Yunus Emre Obodo nke Manisa ma mekwaa mmeghachi omume dị ukwuu na ụgbọ ala uzuoku bịara Balikesir ọzọ. Yunus Emre nke ụgbọ ala na Balikesir [More ...]
KARAKURT nke izizi nke Turkish: 4 Eprel 1957 Maazị Adnan MenderES, onye nọ na mmeghe mmeghe nke Cement Factory na Eskişehir (Çukurhisar) na Eprel 5, nyere ugwu nke State Railways. [More ...]
Ugbo ikuku nke TCDD General Directorate gbazitere Yunus Emre Obodo nke Manisa na-alaghachi na Bal backkesir. Onye otu AK Party Balikesir Mutlu Aydemir kọwara nkọwa ụgbọ ala e nyere Manisa Balikesir obere oge gara aga. [More ...]
TCDD General Manager Ali İhsan Uygun, TÜLOMSAŞ hụrụ nchọpụta na ụlọ ọrụ ahụ. TİBD General Manager Ali İhsan Uygun, onye natara ozi gbasara mmepụta nke engines mba na locomotives si na TÜLOMSAŞ General Manager Hayri Avcı, [More ...]
A ga-akpọghachi ụgbọ elu uzuoku ahụ a gbaziiri n'obodo Yunusemre nke Manisa site na TCDD General Directorate na Balıkesir. Site na profaịlụ bịanyere aka n’etiti TCDD General Directorate na Obodo Yunusemre, 2 puku 557 pound tinyere VAT [More ...]
Ahmet Akın, “E nwere obodo anyị ji ụgwọ. Mpaghara obodo binyere aka na TCDD wee nwee ọgbụgba akwụkwọ ma na-agbazite locomotive a maka otu afọ gaa 2 puku 557 lira gbakwunyere VAT. Amaghị uru! Gịnị kpatara ịgbazite ebumnuche [More ...]
Trainlọ ụgbọ ala ahụ, nke gosipụtara na Balıkesir Gar bein, zigara Manisa site na Directorate TCCD. Mgbe ijechara ozi na Balıkesir na afọ 1960 wee kwụsị ọgụ ya na teknụzụ, 20 nwere [More ...]
Ònye Na-achọ Ka Ọ Bụrụ Onye Ndekọ? Ajụjụ a jụrụ n'asọmpi ahụ chetaara anyị otu mbụ n'ime ụlọ na nke mba na-emepụta ihe ndị a na-eme na steam locomotives. Akuko nke ugbo ahihia anyi bu nke edere n'akwukwo ogugu ndi ozo n'akwukwo ihe ugbo anyi di ka ndi a; [More ...]
The ngo, Turkey bụ naanị na ndị kasị ibu n'ụwa 3. gosipụtara na Eurasia Rail 2019, ngosi maka usoro ụzọ ụgbọ okporo ígwè na nke dị mfe. Usoro nzukọ mba ụwa nke ndị na - eme mkpebi ma na - atụle ihe ndị kachasị ọhụrụ na ngalaba ụgbọ okporo ígwè [More ...]
Translọ Ọrụ Mgbanwe Dijitalụ, nke guzobere n'ime ahụ Tülomsaş n'ihe dị ka 1,5 afọ gara aga, kpebiri ịgbanwe usoro mmegharị ahụ gaa na usoro dijitalụ kwekọrọ na map okporo ụzọ nke edepụtara n'ihi ọmụmụ na ụlọ ọrụ emere. N'ọnọdụ a [More ...]
Enwere ụgbọ ala uzuoku eji egosipụta na Burdur Train Station, nke na-eche ụgbọ oloko kemgbe ọtụtụ afọ. Vingkwaga ọdụ ụgbọ oloko dị n'obodo ahụ na ụlọ ọrụ a haziri ahazi, ma mejupụta atụmatụ nke ịchụpụ ụzọ ụgbọ okporo ígwè, ụgbọ oloko a na-eme mkpọtụ [More ...]
Onye isi oche TCDD, nke dị na mpaghara Ancan nke Sincan nke ụgbọ oloko ahụ juputara na mmanụ iji gaa n'ihu nyocha nke teknụzụ nke mbibi ụgbọ oloko ahụ wee kwuo na a malitere nyocha nyocha. Onye isi oche TCDD kwuru na nkwupụta, “Taa (14.03.2019) n'etiti Izmit na Ankara [More ...]
Ógbè dị iche iche nke Ankara, Caglayan, ụgbọ okporo ígwè na-ebu mmanụ na-adọkpụ ụgbọ okporo ígwè. BTS Anka Alaka Özdemir, Alaka Alaka Ankara, kwuru, "Mgbe a na-egosi ọrụ ụgbọ mmiri ahụ, a na-agba ụgbọ okporo ígwè ahụ n'ihi na a na-ahapụ isi ala ọkara," ka o kwuru. [More ...]
Ragbọ ụgbọ oloko na mpaghara Ankara nke Sincan rụrụ arụ. Ọ bụ ezie na ọ nweghị onye nwụrụ ma ọ bụ merụọ ahụ na ihe ahụ merenụ, enweghị ike ibu ụgbọ oloko ahụ ruo ihe dịka 2 awa. Dika ozi enwetara, awa nke 01.30 [More ...]